(၁၉၆၂-0၂-၁၃) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၆၂ (အသက် ၅၈)
မေဆွိ (၁၉၆၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃)၏ အမည်ရင်းမှာ ဆွေအေးမြင့် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း ကျော်ကြားသည့် တေးသံရှင်နှင့် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။မိခင် ဖြစ်သူမှာ အကယ်ဒမီ များရှင် စည်သူဘွဲ့ရဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ဖြစ်ပြီး မွေးချင်း (၅)ယောက် အနက် လေးယောက်မြောက် သမီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ခေတ်ပေါ် တေးဂီတလောကတွင် အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမ၏ ကော်ပီသီချင်းများအပြင် မြန်မာဟန် ရိုးရာသီချင်းများလည်း လူကြိုက်များသည်။ မေဆွိသည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင် နာမည်ကျော် တေးရေးဆရာ သုခမိန်လှိုင် ရေးသားဖန်တီးသည့် ပန်းသီးသီချင်းများ ကော်ပီစီးရီးဖြင့် လူသိများလာသည်။ မေဆွိသည် စိုင်းထီးဆိုင်အပါအဝင် အမျိုးသား တေးသံရှင်များ၏ သီချင်းများကို ပြန်ဆိုလေ့ရှိသည့်အပြင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်များကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကိုင်ဇာနှင့် သီဆိုသည့် စုံတွဲသီချင်းများမှာလည်း အထူးအောင်မြင်သည်။ ကိုင်ဇာနှင့်သီဆိုခဲ့သော အနမ်းပန်းသီချင်းသည် အင်မတန်မှအောင်မြင်ခဲ့သည်။
မေဆွိသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက်မြို့မှ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာလူမျိုး ဦးဇော်ဝင်းနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက် ဂီတလောကနှင့်ရော အမိမြေကိုပါ ခွဲခွာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ခင်ပွန်းနှင့်အတူ ဒယ်လာဝဲတွင် နေထိုင်သည်။ ယခုအခါသူမသည် ကမ္ဘာတဝန်းရှိ မြန်မာပရိသတ်များအတွက် သီဆိုဖျော်ဖြေနေဆဲ ဖြစ်သည်။ Myanmar Idol ၏ ဒိုင် အဟောင်းတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပြီး ယခုထိ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များသော် တေးသံရှင် တစ်ဦး ပင်ဖြစ်သည်။
၁၄. အချစ်ဆုံးရဲ့အချစ် (ပြေငြိမ်းး. မေဆွိ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မေဆွိ&oldid=523737" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။